Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny hetsika fizahan-tany dia manokatra fanjakana afrikana atsinanana
Fampirantiana lehibe, fanangonana ary tambajotra lehibe no notanterahina tany Afrika Atsinanana tamin'ity volana farany ity miaraka amin'ny famantarana tsara hanokatra ny faritra sy ny sisa amin'i Afrika amin'ny tsena fizahan-tany manerantany.
Fivoriana fizahan-tany dimy lehibe no nokarakaraina tany Afrika Atsinanana teo anelanelan'ny 2-20 Oktobra, nanintona ireo mpandray anjara fototra, mpanao politika, ary mpitantana avy amin'ny loharanom-baovao tsena fizahan-tany manerantany toa ny Kenya Airways.
Malaza ho an'ny bibidia, morontsiraka tropikaly, toerana ara-kolotsaina sy manan-tantara, ny faritra Afrika Atsinanana dia nahasarika ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy mpivarotra dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana oktobra izay nivory handray anjara tamin'ny fampirantiana fizahan-tany telo voalohany sy kaonferansa mpanatanteraka roa nokarakaraina tany Kenya, Tanzania ary Zanzibar.
Ny Africa Hotel Investment Forum (AHIF) dia notontosaina tao amin'ny renivohitr'i Kenya Nairobi nanomboka tamin'ny 2-4 Oktobra niaraka tamin'ny mpandray anjara tsara, mpamatsy tolotra hotely sy mpizahatany indrindra.
Ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fiainana dia, Kenya Balala, dia nilaza fa ny AHIF dia nanintona olona lehibe avy amin'ny indostrian'ny hotely any Afrika sy ivelan'ny kaontinanta.
Ny fihaonambe izay natao tao amin'ny Hotely Radisson Blu, dia nampifandraisina hatreto amin'ireo mpitarika orinasa avy amin'ny tsena iraisam-pirenena sy eo an-toerana amin'ny fizahan-tany, ny fotodrafitrasa ary ny fampandrosoana hotely manerana an'i Afrika.
Andriamatoa Balala dia nilaza fa nampitombo ny fahitan'ny marika i Kenya ho toerana iray vokatry ny AHIF sy ny Magical Kenya Travel Expo izay niseho tamin'ny daty mitovy.
"Tamin'ny taona ara-bola mitohy, ny fahatongavan'ireo mpizahatany natambatra hatramin'ny Jolay 2017 ka hatramin'ny faran'ny volana Jona 2018 dia nikatona tamin'ny 1,488,370 raha oharina amin'ireo mpitsidika 1,393,568 tamin'ny taona 2016-17, mampiseho fitomboana 6.8 isan-jato," hoy i Balala.
Ny AHIF no hany kaonferansa fampiasam-bola hôtely isan-taona izay mampivondrona ireo toetra manandanja ao amin'ny vondrom-bahoakam-barotra amin'ny hotely manana faniriana hampiasa vola any Afrika.
I AHIF dia toerana fihaonambe isan-taona any Afrika ho an'ireo mpampiasa vola, mpandraharaha, mpandraharaha ary mpanolotsaina be antitra indrindra ao amin'ny faritra.
Afrika izao dia faritra fampiasam-bola hôtely atsy ho atsy amin'ireo kaontinanta hafa izay maro amin'ireo mpandraharaha hotely manerantany no efa nandroso tamina paikady fanitarana hotely be fatratra.
Voafetra ny tsenan'ny hotely any Afrika saingy miaraka amin'ny fangatahana mitombo izay atosiky ny fampiasam-bola ho avy amin'ny fizahantany. Sub Sahara Africa dia nampiseho fironana tsara amin'ny fampiasam-bola hôtely hifaninana amin'i Afrika Avaratra, hoy ny mpikarakara ny AHIF.
AHIF no kaonferansa fampiasam-bola hotely voalohany any Afrika, mahasarika tompona hotely iraisam-pirenena malaza, mpampiasa vola, mpamatsy vola, orinasam-pitantanana ary mpanolo-tsaina azy ireo.
Miaraka amin'ny AHIF, ny Magical Kenya Travel Expo (MAKTE) dia notontosaina tamin'ny 3 ka hatramin'ny 5 Oktobra tao amin'ny Ivontoerana Fihaonambe Iraisam-pirenena any Kenya (KICC) hanehoana ireo toerana fizahan-tany sy serivisy ao amin'ny orinasan'ny safari Kenya.
Nahasarika ny mpandray anjara avy amin'ny faritra Afrika Atsinanana sy Afrika ny hetsika haneho ny harenan'ny fizahantany any amin'ny faritra mitady hisambotra tsena fizahan-tany eran-tany.
Firenena mihoatra ny 30 no nandray anjara tamin'ny andiany fahavalo an'ny Magical Kenya Travel Expo. Ny birao fizahan-tany any Kenya, izay mpikarakara ny fampirantiana, dia nilaza fa 185 ny fampirantiana nandray anjara tamin'ny hetsika nifanehanana tamin'ireo 140 mpirantsy tamin'ny fanontana tamin'ny taon-dasa. Ny isan'ireo mpividy nampiantrano nandritra ny Expo tamin'ity taona ity dia nahatratra 150 ka hatramin'ny 132 no voasoratra tamin'ny taon-dasa, hoy ny birao fizahan-tany any Kenya.
Ny mpividy nampiantrano dia nahitana mpiasan'ny fizahan-tany, mpandraharaha fizahan-tany, trano fandraisam-bahiny, ary fampahalalam-baovao avy amin'ny tsenan'ny fizahan-tany manan-tantara any Kenya any Eropa, Afrika, Azia ary Amerika.
Notontosaina tao amin'ny tanànan'ny tanànan'ny tanànan'i Dar es Salaam ny 12 ka hatramin'ny 14 Oktobra ny Expo momba ny fizahantany iraisam-pirenena Swahili (SITE) izay nahasarika orinasa mpizahatany 150 eto an-toerana sy iraisampirenena, ny ankamaroany dia avy any Afrika, miampy 180 ireo mpiara-miombon'antoka mpizahatany kilasy iraisam-pirenena.
Ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Skål faha-79 dia notontosaina tao amin'ny Pride Inn Paradise Beach Hotel, tanànan'ny morontsirak'i Kenya Mombasa, ny 17 ka hatramin'ny 21 Oktobra. Solontena 500 mahery avy amin'ny firenena 40 no nanatrika io fihaonambe io.
Ny filohan'ny skal, Susanna Saari dia nilaza fa mpanova lalao ho an'ny indostrian'ny fizahantany any Mombasa ity hetsika ity.
"Zava-dehibe io hetsika io ho an'ny sehatry ny fizahan-tany any Kenya hanehoana izay atolotry ny firenena, indrindra ny Mombasa," hoy i Susanna.
Nanampy izy fa ny matihanina amin'ny fizahan-tany sy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy eo an-toerana dia nanao dinika, nitadiavana hevitra sy toerana vaovao hidirana.
“Skal no fikambanana fitsangatsanganana sy fizahantany lehibe indrindra eto an-tany. Manana mpikambana manodidina ny 14,000 manerantany isika. Antenainay ny mpiara-miasa aminay an-jatony ho avy hankafy ny fandraisana vahiny any Kenya, ”hoy izy.
Ny nampientanentana indrindra dia ny Zanzibar Tourism Show, fampirantiana voalohany momba ny fizahantany nalamina tao amin'ilay nosy malaza amin'ny fizahan-tany amoron-dranomasina sy fizahan-tany an-dranomasina any Afrika Atsinanana.
Nahasarika fampirantiana maherin'ny 130 ilay seho izay niseho tamin'ny 17 ka hatramin'ny 17 Oktobra tao amin'ny Verde Hotel Mtoni ao amin'ilay nosy.
Ny filohan'ny Zanzibarm Dr. Ali Mohammed Sheinm dia nanokatra ny fampisehoana lehibe nampanantena fa hanamafisana ny fampiasam-bola fizahan-tany ao amin'ny nosy. Nanasa ireo mpizahatany kilasy eran-tany izy hitsidika ity nosy paradisa amin'ny Ranomasimbe Indianina ity, ary nilaza fa mandany andro maro izao ireo mpizahatany rehefa mitsidika morontsiraka nosy sy toerana manintona hafa.
Nilaza izy fa ny isan'ny fijanonana mpizahatany dia nitombo hatramin'ny enina ka hatramin'ny valo andro tao anatin'ny dimy taona lasa.
Nilaza ny filoham-pirenena Zanzibar fa ny governemantany dia manolo-tena hampandroso ny fizahan-tany, mikendry ny hitondra ity Nosy Ranomasimbe Indianina ity ho toekarena antonony amin'ny alàlan'ny fizahan-tany ao anatin'ny roa taona ho avy.
Ny minisitry ny fampahalalam-baovao, fizahan-tany ary vakoka an'i Zanzibar, Mahmoud Thabit Kombo, dia nilaza fa nahasarika mpiranty marobe ny fampisehoana mba handray anjara sy hampiseho ny vokatra fizahan-tany.
"Ity seho ity dia ao anatin'ny paikady fampiroboroboana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany natomboky ny governemanta Zanzibar sy ny sehatra tsy miankina mikendry ny hanampy bebe kokoa ny toerana misy an'i Zanzibar amin'ny toerany maharitra eo amin'ny tsena manerantany," hoy ny Minisitra.
Nambarany fa goavana ny fandraisana anjara amin'ny fizahan-tany amin'ny fizarazarana ara-toekarena eto amin'ny nosy. Zanzibar dia miankina amin'ny kalitaon'ny serivisy omena sy ny haben'ny fampiroboroboana ny vokatra fizahan-tany sy ny serivisy ho an'ireo manao fety manerantany.
Ny zava-bita lehibe iray natao ho an'ny fizahantany afrika atsinanana dia voamarika ny alahady lasa teo raha nanatontosa ny sidina aviaviny voalohany tany Etazonia ny Kenya Airways.
Ny sidina Kenya Airways isan'andro eo anelanelan'ny Nairobi sy New York dia nanamarika fivoarana iray lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany eo amin'ny fanjakana Afrikana Atsinanana amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny rivotra any amin'ny renivohitr'i Kenya Nairobi.
Ny sidina andrasana nandrasana hatry ny ela dia natomboka ny marainan'ny alahady teo, nitondra ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabana Kenya anisan'ny kaompaniam-pitaterana haingam-piasa haingana indrindra avy any Afrika hiditra ny lanitra amerikana.
Manankarena amin'ny fizahan-tany, ny fanjakana atsinanana sy afrika afovoany dia miankina amin'ny mpitatitra rivotra any ivelany hitondra ny mpitsidika azy avy any Etazonia amin'ny alàlan'ny fifandraisana any amin'ny fanjakana hafa ivelan'ny faritra.
Kenya Airways dia nandefa ny sidina mivantana voalohany teo anelanelan'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Jomo Kenyatta any Nairobi sy ny seranam-piaramanidina JF Kennedy International any New York taorian'ny nomen'ny US Federal Aviation Administration (FAA) an'i Kenya ny isa iray tamin'ny sokajy iray tamin'ny febroary 2017, nanokatra ny lalana ho an'ny sidina mivantana iharan'ny fahazoan-dàlana hafa voarain'ny seranam-piaramanidina sy ny fitantanana ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
Nairobi, ivon-toeran'ny Safari Afrika Atsinanana, izao dia ho mpamatsy fifandraisana lehibe eo amin'ny fanjakana Afrikanina Atsinanana (EAC) sy Etazonia, manararaotra ny Kenya Airways sy ny fizahan-tany mitombo haingana any Kenya.
WTTC dia mankasitraka ny Senatera Blunt sy Warner amin'ny fanoloran-tena amin'ny Travel & fizahan-tany